अपहरण गरेको भन्ने कुरा सरासर हावादारी हो : सांसद यादव | News Polar
अपहरण गरेको भन्ने कुरा सरासर हावादारी हो : सांसद यादव
न्यूजपोलार बैशाख १२, २०७७, शुक्रबार
देश कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग लडिरहेको बेला पछिल्लो केही दिन यता नेपाली राजनतीति वृतमा केही कुराहरु चर्चामा आयो । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउनुभएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश जारी भइसकेपछिका घटनाक्रम चर्चामा रहे । बुधबार मात्रै राजपा र समाजवादी पार्टी बिच एकताको घोषणा भयो । तर समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरु पार्टी विभाजन गर्न लागेको समाचार पनि चर्चामा आयो । सांसद प्रदिप यादवको नाम पनि समाजवादिबाट छुट्टिर जाने भन्ने मै थियो । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालका सम्वाद्दाताले सांसद यादवसँग गर्नुभएको कुराकानी ।
नाम आउनुको कारण के हो भने पार्टी भित्र असन्तुष्टि हाम्रो थियो । हामी १०/११ जना माननीय सांसदज्यूहरु एउटा समूह बनाएका थियौं । असन्तुष्टहरु भेला भएर एउटा समुह बनाएका थियौं । हाम्रो जुन पिडा छ, हाम्रो जुन दर्द छ र पार्टी भित्र हाम्रो विभिन्न ठाउँमा आलोचना भएको छ खासगरी पार्टी नेतृत्वबाट । त्यसलाई कसरी पार्टीलाई नेतृत्वप्रति दवाव दिने पार्टीलाई कसरी सहि ट्रयाकमा ल्याउने, पाटीको नेतृत्वले जिल्लामा गएर अपमानित गर्ने गरेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समुह बनाएका थियौं र यसै बिच खासगरेर सरकारबाट अध्यादेश आयो त्यसबाट हामी चर्चामा आयौं । यस्तै उहाँहरुले पार्टी फुटाउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने मिडियामा आयो एकातिर अध्यादेश जनु आएको छ सरकारबाट यो समाजवादि पार्टीलाई फुटाउनका लागि आयो यसबाट हामी चर्चामा आएका हौं। तर हामीले पार्टी फुटाउनका निमित्त समूह बनाएका होइनौं। यो किन बनायौं भने पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व गराउनको निमित्त र कसैलाई काखापाखा पार्टीले नदेखोस, सबैको समान इज्जत गरोस त्यसको लागि हामीले समुह बनाएको सहि हो, असन्तुस्ट रहेको सहि हो । तर पार्टी फुटाउनको निमित्त हामी अगाडि बढेको होइन् । तर केही साथिको राय सल्लाह थियो । त्यो पनि होइनकी राय सल्लाह थिएन् । किन की मौका आएको छ अध्यादेश पनि आइसक्यो यस्तो मौका कहिले आउँदैन हामी अगाडि बढौं भन्ने पनि थियो त्यस कारण हामी चर्चामा आएको सहि कुरा हो ।
डा. सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला ओली जि को सरकारले वहाँलाई पदमुक्त गर्यो । त्यो बेला वहाँ अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँलाई धेरै चोट पुग्यो । त्यसपछि हाम्रा अध्यक्ष जी दिल्ली हुनुहुन्थ्यो । दिल्लीबाट नेपाल आउनुभयो उहाँले फोन सम्म पनि गर्नुभएन् । यो कुरा सुरेन्द्र जीले हामीलाई बताउनुभएको थियो कि मलाई पदमुक्त गर्दा केही भन्नुभएन आफु गएर सपथ लिनुभयो । त्यहाँदेखि नै उहाँ असन्तुष्ट हुनुभयो र सबैभन्दा पहिला आफ्नो असन्तुष्टि हामीसँग राख्ने उहाँ नै हो । की मेरो बेइजेट भयो अपमान भयो पार्टीले केही बोलेन उल्टै अध्यक्षले सपथ लिनुभयो कानून मन्त्रिको लागि । वहाँले यी असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आउनुभयो । र हाम्रो जुन असन्तुष्ट समुह बन्यो त्यसको मुख्य पात्र वहाँ नै हुनुहुन्छ । र लकडाउनको विचमै अध्यादेश जारी भयो र हामी सबै सांसद एकठाउँ जम्म भयौं र सल्लाह गर्यौ कसरी गर्ने, एकदुईजना साथीको कुरा थियो पार्टी फुटाउँ, हामी दुई चार जनाको कुरा थियो पार्टी नफुटाउँ । यसको निकास खोजौं । यो कुरा पनि थियो । डा. साब जिल्ला हुनुहुन्थ्यो । र जिल्ला हुँदा खेरी पूर्व आइजिपीले अपहरण गरेको कुरा आइरहेको छ यो कुरा सरासर हावादारी कुरा हो । साचो कुरा के हो भने उहाँको घरमा उहाँहरु जानुभएको थियो वहाँले बोलाएपछि, मासु भात खुवाउनुभयो । अनि म संग साधन छैन तपाईको साधनमा काठमाडौं जान्छु भनेर सँगै आउनुभएको हो । आफ्नो स्वार्थको मन्त्री पनि खोजेको हो । लिस्ट पनि मागेकै हो टिममा। हामीले त मन्त्रीपनि मानेनौं। खुशि मनले आएको हो । एकजना मात्रै पनि आउनुभएको छैन उहाँसँग तीन जना आउनुभएको थियो । वहाँको आफ्नो बडिगार्डसँगै, वहाँको एकजना नातेदार, र उहाँको प्रमुख सचेतक समेत आउनुभको छ । चारजना वहाँहरु र पूर्व आइजिपीसँगै तीनजना वहाँहरु आउनुभएको थियो । अव तीन जनाले चार जनालाई अपहरण गरेर ल्यायो । अव यो हावादारी कुरा हो की होइन् । यो मिडियामा आउनलाई देखाउनलाई अपहरण भयो भन्ने यो ठिक होइन सांसदको लागि । सांसद भनेको त गरिमाको पद हो । जनताको प्रतिनिधि हौं हामी । हामी हावादारी कुरा गर्ने होइन् । हामी जायज सत्य कुरा बोल्ने हो । त्यस कारण यो अपहरणको चर्चा छ यो कुनै कुरा नै भएको छैन् । दोस्रो कुरा कि डा. साब जिल्ला बाट यहाँ आउनुभयो काठमाडौं वहाँ फाइभस्टारमा सुत्नुभएछ । सबैलाई एकएकवटा रुम लिएर अनि बिहान मर्निङ वाल्कमा निस्कनुभएछ । राति जव थाहा भयो कि पार्टीको एकता भयो, जनता समाजवादी पार्टीको उदय भयो र हामीसँग कुरा गर्दा पनि अव पार्टी फुटाउन हामी जाँदैनौं अव मन्त्री पनि बन्दैन पार्टीबाट पनि गयो । पार्टीले के सोच्ने भयो यो त खराब छ । अनी पार्टीमा हिरो बन्नको लागि , नेताको अगाडि देखाउनको लागि मलाई अपहरणमा पारियो । विचरा नेताहरुलाई नै फसाइदिनुभयो । तर साँचो कुरा के हो भने उहाँले नेता जी हरुलाई पनि फसाउनुभएको छ र नेपालको जनतालाई पनि ढाँटनुभएको छ डा. सुरेन्द्र जी ले । किनकी यो अपहरण हुँदै होइन् ।
अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कसको घरमा हुनुहुन्छ यो त मिडिया लाइभ गर्ने सबैलाई थाहा होला । म भन्दा बढी तपाईहरुलाई थाहा होला । त्यसैले तपाइहरुले पनि खोजिदिनु पर्याे ।
गम्भिर कुरा गर्नुभयो । भावनात्मक प्रश्न छ । म पार्टीको निर्माणकर्ता मध्येको एक हुँ । मधेश आन्दोलनको कमाण्डर म थिए । आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक थिए । मेरो संयोजकत्वमा पर्साको आन्दोलन भएको छ । त्यहाँको नाका अवरोध देखि लिएर सबै कुरा मेरो नृतत्वमा भएको छ । त्यती मात्रै होइन स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा मलाई इगो थियो पार्टीलाई राम्रो सफलता दिलाउँ भन्ने । र दिलाएपनि । पर्साका अधिकांश गाउँपालिकासँगै महानगर पनि कब्जा गरे । जिल्ला समन्वय समितिको सभपति पनि जितियो मेरो नेतृत्वमा । अहिले जुनसुकै स्थानीय प्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस्, सबैले भन्छन् यसको जस प्रदिय यादवलाई जान्छ । उसको मेहनतलाई जान्छ । मैले त्यो मेहनत गरेको छु । त्यसपछि लगत्तै चुनाव भयो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको त्यसमा पनि एक नम्बर पार्टी बनायौँ । कांग्रेस कम्युनिष्ट सबैलाई क्लिन स्वीप गर्ने हामी हो । पर्साका ४ वटै क्षेत्र हामीले कब्जा गर्यौ। प्रदेशको ८ मा ६ सिटमा जित भयो । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वमा जीत हासिल भएको हो ।
तर केही दिन नवित्दै एउटा सानो मिस्टेकले म जस्तो पार्टीको सिपाहीलाई पानी पनि पिउने मौका नदिइ निलम्बन गरियो । त्यसले मलाई धरै सतायो । मलाई लाग्यो की म राजनीतिक कोममा गइसकेको थिए त्यो समयमा ।
जुन पार्टी मेरो आमा हो, मैले जसलाई आमा ठानेको छु । त्यो आमालाई किन लात हान्ने त । यो पार्टीमा मैले यति मेहनत गरेको छु । मलाई पार्टीलाई किन यस्तो सजाय दियो । मैले कुन पाप गरेको थिए भन्ने लागेको थियो । यो के थियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वपंक्ति छ । त्यो केही गणेश प्रवृति गर्ने पात्रहरुद्वारा मलाई विना कारण दण्डित गर्यो ।
कुनैपनि नेताहरुको घर जाने स्वभाव मेरो छैन् । डा. बाबुराम भट्टराईको घर त्यो पीडामा एक पटक मात्रै गएको छ । असोक राई ज्यूको घर तीन पटक मात्र गएको छु । राजेन्द्र श्रेष्ठको घरमा एक पटक मात्रै गएको छु । पार्टी एकता भएको कति धेरै भयो । म कामप्रति विश्वास गर्छु । दिउँसो हेर्नुहुन्छ भने म संसदमा भेटिन्छु बेलुका निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनताका समस्या सुन्छु । जनतासँग हुन्छु । म कामप्रति विश्वास गर्छु । नेताहरुले रुचाएपनि नरुचाएपनि नेताको घरमा गएर विश्वास गर्ने मान्छे म होइन् । तर त्यसको फाइदा केही गणेश प्रवृतिका मान्छेहरुले लिए । म माथि गलत डिसिजन भयो । त्यती मात्रै हाइने नयाँ मान्छे आएपछि पुराना मान्छेलाई हेर्नै छोड्ने । मुखै मन पर्दैन नेतृत्वलाई त्यो प्रवृति थियो । फेरी २, ३ महिनामा नयाँ मान्छेपनि पुरानो भएपछि त्यो पनि मन पर्न छोड्ने । यो ठिक भएन नयाँ पुरानोलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मात्रै हो । यो तरिकाले कहिँ न कहिँ चोट लाग्छ नी ।
चुनाव प्रचारमा कोही नेता आएका छैनन् । सबै नेताहरु आफ्नो सिट बचाउन लागेको थियो । हामीले जितेको छ की हारेर बसेको छ के अवस्था भन्ने पनि कसैलाई मतलव थिएन् । हामीले कसरी जितेर आयौँ त्यो पीडा हामीलाई थाहा छ । राजपा र सांसदको एकता किन भयो आज । ठूलो पार्टी बनाउन न भयो । एउटा सन्देश दिनका लागि एकता भएको हो नी ।
हामीलाई पनि माया छ । माया नभएको होइन् । पार्टीलाई आफ्नो आमा ठान्छौँ । पुलिसको डण्डा लात जुता खाएर योगदान गरेको मान्छेलाई सामान्य गल्तिले कारवाही गर्छ भने निश्चित रुपमा एक छिनका लागि पार्टीमा किन बस्ने भन्ने कुरा आएकै थियो । अध्यक्ष नै पछाडी परेपछि भोलीको भविष्य मेरो कहाँ त भनेर डुब्ने मान्छेले किनारा त खोज्छ । खोजेको अवश्य हो । सबै साथीहरुको सर सल्लाह आयो । पार्टीमा सुधार हुन्छ । तपाईहरुले गलत कदम नचालनुहोस् । तर्पाइहरु आफ्नो कदम सच्याएर पार्टीमा सुधारका लागि हामी कदम गर्छौँ भनेर ।
अब निकास आउँछ मजबुद हामी बनाउँछौँ । पार्टीलाई देशकै राम्रो पार्टी बनाउनलाई हामी प्रयास गर्छौ । सानो कार्यकर्तालाई पनि गालि गरेर होइन फकाएर काम लिनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई सल्लाह दिन चाहान्छु ।
प्रकाशित : बैशाख १२, २०७७, २१:१४:२३